Fake GPS GO Location Spoofer Free အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（9.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Fake GPS GO Location Spoofer Free
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သော "Google Play0န်ဆောင်မှုများ" ကို 2018 ခုနှစ်ဇွန်လမှ "အသစ်ပြောင်းခြင်း) အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးမှာအဖြေပေးတယ် - သင်အကူအညီလိုအပ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပါ။ httpsporte_gps_Route_faq.html
- cooldown ဇယား
Stops နှင့် Gyms
joystick operty (Enjoystick တို့သည်မျက်နှာပြင်နှင့်ကိုက်ညီရန်လှည့်ခြင်း)
Options Options နှင့် GPX Imports Open More, Expert Mode အပါအ0င် Spoofing options အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်း -
- Android versions အားလုံးတွင်ပုံမှန် spoofing ဖန်တီးမှု
GAPs ကိုသင်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏လက်ရှိနီးကပ်မှုကိုကြော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယူပြီးသင်၏မိတ်ဆွေများကိုမည်သည့်လူမှုကွန်ယက်တွင်မဆိုသင်နှင့်အခြားတစ်နေရာရာတွင်မစဉ်းစားရန်မည်သည့်လူမှုကွန်ယက်တွင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။ မြို့အသီးသီးရှိလူများကိုရှာဖွေပါ, မြို့မှမြို့မှမြို့တော်သို့ပျံသန်းရန်ပျံသန်းသည်။ သင်ရိုက်ကူးနေသည့်အချိန်တွင်တည်နေရာကိုဖွင့်ရန်မေ့နေလျှင်ပင် Geotag ကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းမှမည်သည့်အပလီကေးရှင်းအပါအ0င်အကျိုးအမြတ်ကို အသုံးပြု. မရပါ။ "သို့မဟုတ်အချို့သောကိရိယာများတွင်" device ကိုသာ "ဟုခေါ်ကြသည်။
- သင်၏ faked တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပြီး Play ကိုနှိပ်ပါ ယင်ကောင် GPS တွင်။
သင်၏တည်နေရာကို browser တစ်ခုပေါ်တွင်ပြောင်းလဲလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ app နှင့် ပတ်သက်. VPNA0န်ဆောင်မှုတစ်ခုလိုအပ်သည်။
မြေပုံမြင်ကွင်းကိုပြသရန် - Rease ကြမ်းတမ်းစွာနှင့်ကောင်းမွန်သောနေရာ - သင်၏လက်ရှိတည်နေရာအတုလုပ်ရန် - Developer Settings (applications) အရမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းနေရာများ (applications) အောက်တွင်မုတ်ဆိတ်မွေးနေရာများကိုခွင့်ပြုပါ။
Everybr> ငါတို့ app ရဲ့အဆုံးသုံးစွဲသူတွေရဲ့အသုံးဝင်မှုအတွက်မည်သည့်အသုံးချမှုအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုတာဝန်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ စမ်းသပ်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။
app ကိုအင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်နှင့်ဂျပန်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားသည်
Fake GPS Free For Pokemon Go
How to set Fake gps location in Android no root required| 2019 rahul singh bisht
Zay yar Koll